Madaxweyne Biden oo saxiixay in Ciidamada Mareykanka lagu celiyo Somaliya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Biden oo saxiixay in Ciidamada Mareykanka lagu celiyo Somaliya
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ayaa saxiixay amar boqolaal ka mid ah ciidamada gaarka ee Mareykanka dib loogu celinayo Somaliya, sida uu baahiyay Wargeyska New York Times.
Ciidamadan ayaa dalka laga saaray maalmihii ugu dambeysay ee xilka uu hayay Madaxweyne Donald Trump. Tan iyo xilliga waxa uu hakad ku yimid duqaymihii cirka ee Drones-ka Mareykanka ka gaysanayeen deegaanada ay Shabaabku maamulaan.
Ciidamada Mareykanka oo gaarayay 700 oo askari ayaa door muhiim ah ka qaadanayay la dagaalanka Ururada Al Shabaab iyo Daacishta Somaliya.
Ciidamadan oo fadhigoodu ahaa Garoonka Ciidankii Cirka ee Balli-doogle ayay tahay inay dib u bilaabaan hawlgaladii Dowladda Federaalka lagaga gacan-siinayay la dagaalanka kooxaha argagixisada.
Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale ogolaaday oo saxiixay in la beegsado ​​12 ka mid ah Saraakiisha sarsare ee Ururka Al Shabaab, ka dib codsi uga yimid Waaxda Gaashaandhigga dalkaasi ee Pentagon-ka.
Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka, haweeneyda lagu magacaabo Adrienne Watson ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay tallaabada uu amarka ku bixiyay Madaxweynuhu, taasoo sida ay sheegtay wax ka tari doonto dagaalka lagula jiro Al Shabaab.
Pentagon-ka iyo Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa Shabaabka oo xiriir la leh Al Qaacidda u arka halista ugu weyn ee ka jirta qaaradda.
Amarka Madaxweyne Biden ayaa imaanaya, ka dib weerarkii cag-marinta ahaa ee ay Shabaabku 3-dii bishan ku qaadeen Xerada Ciidanka ATMIS ku leeyihiin deegaanka Ceelbaraf ee Gobolka Shabellaha Dhexe iyo is bedelka ku yimid hoggaanka Dowladda Federaalka.
Previous articleMadaxweynaha cusub ee Dowladda Federaalka oo la kulmay Talisyada Militariga & Booliska
Next articleXasan Sheekh Maxamuud oo caawa la kulmay Ra’iisal Wasaare Rooble